साबधान ! को'रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस - Nawalpur Dainik
साबधान ! को’रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
May 21, 2021 by Nawalpur Dainik
एजेन्सी-साबधान ! को’रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! को- रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु होला ।
Posted in जीवनशैली, पत्रपत्रिकाबाट, स्वाथ्य, हेडलाइन
Prevजेठ ०८ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Nextको-रोना बिरामीका आँखा बिगार्ने कालो ढुसी नेपालमै देखियो, कसरी जोगिने ?